Waa maxay tirtir qoyan oo aqoon leh
Qiimaha PH: Kahor iibsiga masaxa qoyan, waa inaan tijaabinaa qiimeheeda ph. Marka loo eego qawaaniinta qaranka, qiimaha ph ee masaxa qoyanku waa inuu u dhexeeyaa 3.5 ilaa 8.5. Marka loo eego natiijooyinka baaritaanka, waxaa lagu qiimeeyaa in qiimaha ph ee tirtirka qoyan uu u qalmo iyo in kale. Sidee loo kala saaraa qoyaanka masaxa qoyan? ...
Kooxo da 'kala duwan ah ayaa ku habboon tirtiraha qoyan ee kala duwan
Kooxaha da 'kala duwan waxay ku habboon yihiin tirtirka qoyan ee kala duwan, carruurtuna waxay leeyihiin iska caabin daciif ah, sidaa darteed waxyaabaha la taaban karo waa inay ahaadaan kuwo badbaado leh oo caafimaad qaba marka loo eego maaddooyinka iyo maaddooyinka, gaar ahaan kuwa taabashada maqaarka ama afka. Waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan oo kala duwan ...
Sida loo doorto masaxaadda aalkolada
Sidee loo doortaa masaxayaasha aalkolada? 1. Isku-uruurinta khamriga Waxaad fiirin kartaa baakadaha dibedda iyo tilmaamaha si aad marka hore u go'aamiso isku-uruurinta aalkolada ee masaxaada. Waqtigan xaadirka ah, 75% aalkolada waxaa badanaa loo isticmaalaa suuqa, taas oo ku guuleysan karta saameyn yar oo nadiifin ah. 2. Noocyada a ...
Aragtida dadweynaha, dharka dhaqameed ayaa la tolay. Magaca dharka aan dunta lahayn ayaa wareersan, runti ma wuxuu u baahan yahay in la tolo? Dhar aan tolmo lahayn ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dhar aan xirnayn, kuwaas oo ah dhar aan u baahnayn in lagu xiro ama lagu xiro. Dhaqan ahaan laguma sameeyo isdhaxgalka iyo tolnimada ...
Sababtoo ah saameynta cudurka faafa ee cusub ee 2020, warshadaha badankood waxay la kulmeen in muddo ah maqnaansho, howlihii kala duwan ee dhaqaalaha ayaa si ku meel gaar ah u istaagay. Xaaladdan oo kale, warshadaha dharka aan tolnayn ayaa ka mashquulsan sidii hore. Sida baahida loo qabo alaabooyinka sida jeermiska dila ...
Sababo kala duwan awgood, silsiladda warshadaha kiimikada ayaa cirka isku shareertay, iyo qiimaha daraasiin alaabada ceeriin ee kiimikada ah ay sare u kaceen. Warshadaha wax soo saarka fayadhowrka ayaa wali leh culeyska sanadkaan waana mid si toos ah u saameynaya. Shirkado badan oo alaab ceeriin iyo kaabayaal ah (oo ay ku jiraan polymer, spandex, ...
Waraaqaha guryaha ee Shiinaha iyo wax soo saarka fayadhowrka ee soo dejinta iyo dhoofinta xaaladda 2020
Soo dejinta waraaqda guriga Sannadihii la soo dhaafay, mugga soo dejinta ee suuqa waraaqaha Shiinaha ayaa asal ahaan sii waday inuu hoos u dhaco. Marka la gaaro 2020, mugga soo dejinta ee sanadkiiba waraaqda guryaha waxay noqon doontaa oo kaliya 27,700 tan, hoos u dhac 12.67% ah laga bilaabo 2019. Kobaca sii socda, noocyada wax soo saarka ee aad iyo aad u badan, ayaa ...
4-ta talaabo ee fudud, waxay ku barayaan inaad doorato tirtirid nabdoon! 1: Eeg waxyaabaha ku jira iyo baakadaha. Waalidiintu waa inay ka soo iibsadaan kanaalka caadiga ah masaxa qoyan ee dhallaanka, waana inay si taxaddar leh u fiiriyaan markay dooranayaan: Maaddooyinka wax soo saarka, waxaa ugu wanaagsan in la doorto badeecooyinka sida muuqata loogu calaamadeeyay inay yihiin kuwa aan ...
Ha dooran noocyada khaldan ee ilmahaagu isticmaalo maalin kasta!
Markaad ilmo dhasho ka dib, masaxaada qoyan waxay noqdeen wax qasab ku ah qoyska. Gaar ahaan marka aad ilmahaaga la soo baxdo, way ku habboon tahay inaad qaaddo, waad iska masaxi kartaa dameerkaaga markii saxaradaada iyo saxaradaadu kaa yaraato, waad iska dhaqi kartaa gacmaha ilmahaaga hadday wasakh yihiin, waadna iska tuuri kartaa markay wasakhoodaan, .
Qiimaynta masaxa qoyan ee ilmaha yar: tirtiridan qoyan waxay noqdeen masaxaad sun ah
Maaddaama heerka nolosha uu ka sii fiicnaanayo oo ka sii fiicnaanayo, fikradda dadka ee daryeelka carruurta ayaa si tartiib tartiib ah isu beddeleysa, gaar ahaan dhallinta yar yar ee dhalatay 80s iyo 90s ee ay tahay inay fiiro gaar ah u yeeshaan raaxada nolosha. Marka loo eego waalidiinta da'da yar, habdhaqanka jiilkii hore ee tirtirayay ev ...
Waxyaabaha wanaagsan cleaning Nadiifinta khaaska ah ee jaakadaha hoosta, jilicsan oo aan waxyeello u geysan gacmaha.
Sababtoo ah dadku waxay ka baqayaan wasakhda, miyaan qof walba ku dhiiran inuu iibsado dhar midab khafiifa leh, gaar ahaan kuwa cad ee saafiga ah? Xirmooyinka dharka ayaa ahaa madow iyo jaalle, si kama ’ah ayuu gacanta ugu taagay si uu u arko inuu ku indho sarcaadinayo indhihiisa karaahiyada leh! Markaad dharka beddeleyso, xiro ...
Masaxaad qoyan oo ka samaysan 100% cudbi waa maqaar-saaxiibtinimo oo jilicsan, oo u qalma dib-u-iibsi aan xad lahayn
Waxaan isticmaalaa masaxyada qoyan maalin kasta, laakiin runtii ma jiraan laba waxyaalood oo i cajab geliya. Intooda badani waxay lamid yihiin kuwa meesha maraya… ma jiro dareen jiritaan. 100% suufka wajiga lagu nadiifiyo masaxa qoyan ee aan isticmaalay dhawaan wuxuu i siiyay dareen layaab leh si aan u helo waxyaabo wanaagsan. Qoyaanka, maqaarka u roon, iyo sidaas ...
Kooxo da 'kala duwan ah ayaa ku habboon ...